एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि, प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँले बढ्यो
नेपाल आँखा अस्पताल २४सै घण्टा सेवामा
मन्त्रीलाई समेत आत्महत्या गराउने यो कोरोना-कहर !
कोभिड-१९ : सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट १६९ कैदी कारागार मुक्त
भारतबाट फर्किएलगत्तै उच्च ज्वरो, उपचारको क्रममा मृत्यु
घटना र विचार, न्युज डेस्क !2months ago February 4, 2020
नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेको भन्दै निगमले सोमबार (२० माघ) मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. २५ ले वृद्धि गरेको हो । यससँगै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर एक हजार ३७५ पुगेको छ ।
यसैगरी निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १ घटाइएको जनाएको छ । समायोजनसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १०९ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु ९९ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत नै राखेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य केही घटेर आएकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले जानकारी दिए ।
निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१’ अनुसार प्रत्येक १५–१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । भारतीय आयल निगमले प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ ।
मूल्य समायोजनपश्चात भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन मूल्य सस्तो छ । वीरगन्ज नाकामा इन्धनको मूल्य भारतको रक्सौलमा कायम पेट्रोलको बिक्री मूल्यभन्दा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २७ पैसा सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ ।
कोरोनासँग लड्दै न्यूयोर्क शहर
ह्यारी र मेघानले आफ्नो सुरक्षा खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रष्टोक्ति
सोम, चैत्र १७, २०७६
कोभिड-१९ : दक्षिण अमेरिकामा नेपालीलाई समस्या पर्न सक्छ !